पाँचथर । पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमानामा निर्माण गरिएको काबेली बी वान जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको छ । २५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भएसँगै व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिएको हो ।
गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भएता पनि उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न आवश्यक पर्ने कोरिडोर (काबेली करिडोर) निर्माणमा ढिलाइ हँुदा आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत लम्बिएको थियो । झण्डै १५ दिनको परीक्षण उत्पादनपश्चात् गएको हप्तादेखि आयोजनाले नियमित उत्पादन थालेको हो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस क्षेत्रमा बनाइरहेको काबेली करिडोरको निर्माण समेत केही महीना अगाडि मात्र भएको थियो ।
परीक्षण उत्पादनपश्चात् व्यावसायिक उत्पादनको चरणमा प्रवेश गरेको आयोजनाको निर्माणको जिम्मा लिएको अरुण काबेली पावर लिमिटेडका निर्देशक रमेश न्यौपानेले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत भने बढेको छ । ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म ५ अर्ब रुपैयाँ लागत पुगेको न्यौपानेले जानकारी दिए । मूल्यवृद्धि, नाकाबन्दी तथा काबेली कोरिडोरको निर्माणमा ढिलाइले कर्मचारी, बैंकको ब्याज र अन्य क्षेत्रमा लागत बढेको उनले बताए ।
पाँचथरको थर्पू र ताप्लेजुङको थुम्वेदिन गाविसमा पर्ने इवा काबेली दोभानमा आयोजनाको ड्याम साइट निर्माण भएको छ । आयोजनाले ड्याम साइटबाट ४ हजार ८ सय मिटर लामो ४ डायमिटर गोलाइ भएको फलामको पाइपपाट पानी बगाएर पावर हाउससम्म पुर्‍याइएको छ । पूर्वी क्षेत्रमा पहिलोपल्ट ठूलो विद्युत् आयोजनाले सुरुङमार्फत नभई फलामको पाइपमार्फत ड्याम साइटबाट टर्वाइनसम्म पानी पुर्‍याएको हो ।
४३८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको आयोजनाले प्रतिसेकेन्ड ३५ हजार लिटर पानीको सहायताले वर्षायाममा २५ मेवा र हिउँदमा १० मेवासम्म विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । आयोजनाको ७० प्रतिशत लागत (रू. २८० करोड) बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत र बाँकी ३० प्रतिशत लगानीकर्तामार्फत लगानी गरिएको छ ।
स्याउले मूल्य नपाएपछि गाईवस्तुलाई खोले !
३० हजार भुइँकटहर नबिकेर बोटमै कुहिने अवस्थामा[२०७६ चैत, २३]
उद्योगीका संगठनले गरे २४ लाखको खाद्यान्न सहयोग[२०७६ चैत, २३]
भीढ बढेपछि नयाँ स्थानमा गुद्री बजार सञ्चालन[२०७६ चैत, २२]
विपन्न परिवारलाई राहतका लागि ‘खाद्य बैंक’ स्थापना[२०७६ चैत, २२]
लकडाउनको असर मकै र तरकारी बालीमा[२०७६ चैत, २२]